गृहमन्त्रीले छोरी बनाएको बालिकालाई वडाध्यक्ष र उनका छोराले..? – Kavrepati
Home / समाचार / गृहमन्त्रीले छोरी बनाएको बालिकालाई वडाध्यक्ष र उनका छोराले..?
गृहमन्त्रीले छोरी बनाएको बालिकालाई वडाध्यक्ष र उनका छोराले..?
admin September 6, 2021	समाचार Leaveacomment 176 Views
सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका– १० का वडाअध्यक्ष गंगाराम चनाराका छोरा कुश्माखर चनारालाई गम्भिर आरोप लागेको छ । उनलाई एक बालिका कर णी को आरोप लागेको हो । १५ वर्षकी बालिकाले त्यस्तो आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । उनी अहिले पक्राउ परेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय आठबीसकोट रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक कपिल शाहीका अनुसार बालगृहमा बस्दै आएकी बालिकाले आइतबार प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् ।
उजुरीमा बालिकाले कुश्माखरका बुवा गंगाराम र आमा सुनिता चनारालाई पनि श्रम शो ष ण गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनी गर्भवती छन् । दश हप्ताको बच्चा उनको पेटमा हुकिएरहेको बालिकाले बताएकी छन् ।
ति युवाले आफुलाई २ वर्ष देखि पी डि त बनाएको आरोप लगाएकी छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ वर्ष पहिले ति बालिकाको अभिभावकत्व लिएका थिए । गृहमन्त्रीकै संरक्षणमा ती बालिकालाई सिस्ने हिमाल बालगृहमा भर्ना गरीएको थियो ।
‘कुखुरालाई चारो हाल्न खोरमा गएको मौका छोपी वडा अध्यक्ष गंगाराम र सन्चालिका सुनिताको कान्छो छोरा कुश्माकर चनारा ९रवि०ले पछाडिबाट आएर मुख थु नी क र णी गरेको बालिकाको आरोप छ । अहिले महिनावारीसमेत रोकिएको भन्दै ती बालिकाले गर्भ रहेको जनाएकी छन् ।’
Previous अमेरिकाको क्यालिफोर्निया बस्ने भन्दै युवाहरूसँग सम्बन्ध बढाउने नेपाली युवती
Next संखुवासभा घटना : घटनास्थलमा प्रहरी, दुई बच्चासहित ६ को कस्ले लियो ज्या’न ?